admin – Page 252 – Shabakadda Amiirnuur
Degdeg: Xarakada Al-Shabaab oo Sheegatay Mas’uuliyadda Dagaalada Ka Socda Madaxtooyada Iyo Nabad SUgidda.
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayay ku sheegatay mas’uuliyadda weeraro xooggan oo caawa Maqribkii ka bilaawday xarumo muhiim ah oo ku dhow xarunta madaxtooyada Villa Somalia ee magaalada Muqdisho. “Ciidamo aad u hubeysan oo ka tirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa caawa maqribkii howlgal ballaaran ku beegsaday […]
Degdeg: Dagaalo Iyo Qaraxyo Waaweyn oo Caawa Lagu Qaaday Xarumaha Ugu Muhiimsan Ee DF.
Magaalada Muqdisho ayaa salaadii maqrib kadib laga maqlay qaraxyo waaweyn iyo dagaallo toos ah oo u dhaxeeya ciidamada Xarakada Al-Shabaab iyo kuwa DF. Dagaalada iyo qaraxyada ayaa ka dhacaya inta u dhaxaysa isgosyka Sayidka illaa hotel Jubba, halkaasoo ay ku yaallaan xarumaha ugu muhiimsan ee DF. Ilo wareedyo ayaa sheegaya […]
Dhageyso Barnaamijka Diiradda Jimcaha oo Lagu Falanqeeyay Canshuurta Xad Dhaafka Ah Ee Muqdisho.
Diiradda Jimcaha waa barnaamij todobaadle ah oo maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan laguna soo qaato mowduuc muhim ah. Maanta waxaa lagu falanqeeyay culeyska dhanka canshuurta ah ee ay DF kusoo rogtay ganacsatada magaalada Muqdisho Muqdisho. Barnaamijka waxaa marti ku ah aqoonyahan dhanka dhaqaalaha ah, ganacsade […]
Maqaallo Uncategorized Wararka Gudaha
Maqaal: Xilalka “DF” Waxaa Lagu Qeybsaday 4.5 Canshuurtana Waxaa Laga Qaadayaa Muqdisho oo Kaliya!!
Markaan arkay xaaladda ka taagan Muqdisho gaar ahaan suuqa Bakaaraha. Markaan arkay cabashada bulshada iyo ganacsatada Muqdisho. Markaan arkay awaamiirta canshuur dalbasho ee dowladda. Markaan qiimeeyay halka ay wax iska qaban la’yihiin, ayaa waxaa ii soo baxay qodobo dhowr ah oo ay tahay in la baraarujiyo. Maqaalkan waxaan daah-fur uga […]
Maxaa Ka Jira in Duqeymo Ay Ka Dhaceen Magaalada Jamaame? iyo in Ciidamada Huwanta Ah Ay Qabsadeen Deegaanka Sanguuni? [Warbixin].
Xaalad degananaan ah ayaa maalintii labaad ka jirta deegaanno dhanka waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Ciidamada Xarakada Al Shabaab ayaa difaacday gacan ku heynta deegaanka Sanguuni oo qiyaastii 45 KM ujira magaalada Kismaayo. Ciidamo isugu jiray Mareykan, Kenyaan iyo Itoobiyaan ayaa shalay gelinkii hore iyagoo […]
250 Muslimiin Ah oo Mar Qura Lagu Xasuuqay Suuriya. (Daawo Vedio)
Khasaara aad u xooggan ayaa ka dhashay duqeymo bahalnimo ah oo diyaaradaha dagaalka Ruushka ay ka geysteen deegaanno ku dhow magaalada Dimishiq ee caasimadda Suuriya. Wararka ka imaanaya degmada Ghuudada Bari ayaa sheegaya in ugu yaraan 250 qof shacab ah ay ku dhinteen sawaariikh aan loo meel dayin oo lagu […]
Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan oo shaacisay iney dishey ciidamo katirsan NATO.
Bayaan kasoo baxay imaarada islaamiga ee afqaanistaan ayaa lagu sheegay in weerar ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan shisheeyaha uu ka dhashey khasaaro xoogan. Ciidamada mujaahidiinta qeybta jugta culus ayaa sawaariikh ku garaacay saldhig ciidan oo ku yaala garoonka milliteri ee gobolka faraah, waxaana duqeyntaas ka […]
Ku Dhawaad 10 Askari oo DF Looga Dilay Qarax Ka Dhacay Sh/hoose.
Ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federalka ah ayaa lagu dilay qarax culus oo shalay galinkii dambe ka dhacay inta u dhaxaysa degaanka Warmaxan iyo degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeelaha hoose. Qaraxa oo lala eegtay kolonyo gaadiid ah ayaa waxaa uu burburiyay hal gaari oo Cabdi bile […]
Gabar Ku Umushay Jidka Maka Al-Mukarama Kadib Markii La Xannibay Gaarigii Siday.
Wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa maanta la xiray waxaana ay saameyn ku yeesheen dhammaan dadka shacabka ah, gaar ahaan ardayda, shaqaalaha, ganacsatada iyo dadka bukaanada ah. Wadada oo loo xiray ra’iisulwasaare ku xigeenka Turkiga oo imanayay Muqdisho ayaa waxaa saameynteeda kamid ah dhacdo murugo leh oo ay dad badani […]
Daawo Sheekh Dr Ayman Oo Jeediyay Kalimad Ku Wajahan Shaam.
Mu’asasada As-saxaab ee garabka Warbaahineed ee Hogaanka guud Mujaahdiiinta Al-qaacidah ayaa baahisay kalimad cusub oo uu jeediyay Amiirka guud Mujaahidiinta Al-qaacidah Sheekh Dr Ayman Al-dawaahiri. Kalimaddan oo Maqal iyo Muuqaal ah islamarkaana soconeyso muddo Lix Daqiiqo ah waxa uu Sheekh Ayman Al-dawaahiri sigaar ah kula hadlay Mujaahidiinta iyo guud ahaan […]
« Previous 1 … 250 251 252 253 254 … 281 Next »